Yini ufuna, singakwazi ngokwezifiso imvamisa, ilogo, umbala, ijamo
Kunzima ukuthola ofanele isixazululo anti-theft kwabanye izimpahla ngezinye izikhathi. Yasen iyajabula isixazululo sipho design lezi impahla ngokusho khulula yezimfuneko amaklayenti '.
Yasen ngokukhethekile-R & D, ukukhiqiza kanye marketing EAS imikhiqizo. Yasen has uhla egcwele EAS imikhiqizo: RF / AM ithegi kanzima, RF / AM ilebula, EAS RF / uhlelo yezokuphepha AM, EAS detacher njll
Izicelo zihlanganisa kagesi imishini, izindwangu, izicathulo kanye nezitolo ezinkulu. Imikhiqizo yethu ezidumile emakethe ezifuywayo angaphandle.
Yasen usezuze ISO9001 isitifiketi, isitifiketi CE futhi isitifiketi SGS ngoba EAS izinhlelo. Ubuningi imikhiqizo yethu kanye nobuchwepheshe futhi athole isivikelo-patent.
KUSUKELA YONYAKA KA 2001
Professional futhi ngomdlandla R & D Ithimba unike amandla Yasen ukusiza amaklayenti bethu umklamo imfashini kanye nama-practical. 10 zokukhiqiza imigqa kanye onazo zonke yasekuqaleni izindawo zokukhiqiza, imishini nokuhlolwa amathuluzi unike amandla Yasen ukunikeza imikhiqizo quality onokwethenjelwa futhi amanani abiza kumakhasimende ethu ngesikhathi esifanele.
Yasen angakhiqiza izinhlamvu zemali eziyizigidi ezingu-100 EAS tags kanye nezinhlamvu eziyizigidi ezingu-800 amalebula AM ngonyaka.
Zonke imikhiqizo ekhiqizwa futhi lwahlolwa ngokuqinile ngokuvumelana ejwayelekile zikazwelonke nezamazwe ngamazwe.
Yini Amaklayenti Ithi?
Besilokhu nge Yasen iminyaka engaphezu 2 iminyaka futhi baye brilliant ngesikhathi linakekela ibhizinisi lethu. Wazo wempuphu intengo kanye kwamakhasimende bebelokhu kakhulu, okwenza umsebenzi wethu ngempumelelo. --- Titan Thompson
umkhiqizo Yasen sika nezimo kuye kwasisiza ukugcina GCWELE ENGAMELA ukuthenga yethu ngenkathi ekunciphiseni izindleko. Yasen Iye yasisiza futhi ukuba ufake EAS alamu ohlelweni esizeni. --- Injabulo Jansen
Kuye kwaba injabulo yangempela ukubambisana Yasen Co. ngobuqotho yabo emsebenzini kanye ephrofeshinali imikhiqizo yabo izici eziyinhloko lenkampani. Ngithanda ukudlulisa ukubonga kwami ​​ku ithimba Yasen ngokusisekela kwabo okukhulu eminyakeni siye saba nethuba babambisane nabo. ------- Amari Wilder
nokubambisana Omkhulu nge Yasen ikakhulukazi ubungane Ben. Ben a guy enhle ngempela; kumelwe sibe nesimo nokubambisana okwengeziwe ------ Jamie Smith
Mini Eas Detacher , Ezokuphepha Detacher Cap , Optical Tag Detacher , Magnetic Key Detacher , Eas Glass Tag Detacher , Glass Tag Detacher ,